Igbo, John: Lesson 012 - Ndị nnọchiteanya Sanhedrin jụrụ Baptizim (Jọn 1:19-28) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 012 (The Sanhedrin questions the Baptist)
22 Ya mere ha siri ya, Gì onwe-gi bu onye? Nye anyị azịza iji laghachikwuru ndị zitere anyị. Gini ka i nēkwu bayere Onwe-gi? 23 O we si, Mu onwem bu olu otù onye nēti nkpu n'ọhia, si, Menu uzọ Onye-nwe-ayi ka o guzozie ike, dika Aisaia onye-amuma kwuru. 24 Ndị ahụ e zipụrụ bụ ndị Farisii.
Ndị nnọchiteanya ahụ weghaara ajụjụ ha dị ka akụ a tụrụ aka na Baptist. Ajụjụ ndị a metụtara njikọ ụgha nke ha tụrụ anya na ha ga-apụta tupu oge ọbịbịa Mezaịa ahụ. Ma mgbe Jọn kwụsịrị ịbụ Mezaịa ahụ ma ọ bụ Ịlaịja ma ọ bụ onye amụma ahụ Mozis buru n'amụma, ọ tụfuru ihe dị mkpa na ihe ize ndụ n'anya ha. Ma ha nọgidere na-ajụ onye ọ bụ, onye nyere ya ozi ya. Ebumnuche ha abụghị ịlaghachi na Sanhedrin na-enweghị nyochacha ọnọdụ ya.Ajụjụ ndị ahụ enweghị ihe jikọrọ amụma Aịsaịa (Aịzaya 40: 3), mana Mmụọ Nsọ mere ka onye Baptist ghọọ ihe ederede a. O kwuru onwe ya dị ka olu na-eti mkpu n'ọzara, na-akwadebe ụzọ nke Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na ọ gaghị enye ha ihe ngosi sitere na Akwụkwọ Nsọ, ha ga-ebo ya ebubo na ọ na-enye onwe ya ikike ma na-emepụta mkpughe ya. Mgbe ahụ, ha gaara ama ya ikpe n'ihi nkwulu. Ya mere, John wedara onwe ya ala ma were ọnọdụ kachasị elu n'Agba Ochie, na-ekwu na ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ olu na-eti mkpu n'ọzara.
Anyị nile bi n'ala ịkpa nke ụwa anyị. Gburugburu anyị bụ ọgba aghara na ọgba aghara. Ma Chineke ahapụghị ụwa anyị dara ogbenye na ndị rụrụ arụ n'ime ya n'enweghị onye inyeaka. Ọ na-abịakwute ihe a kpọrọ mmadụ iji chebe ha. Nke a si n'eluigwe gaa n'ụwa bụ amara dị ukwuu. Onye Nsọ adịghị ebibi anyị dị ka anyị kwesịrị, ma na-achọ anyị ma na-enyocha anyị ndị furu efu. Ịhụnanya ya karịrị uche anyị nwere ike ịghọta. Nzoputa ya nke oma gunyere igbanwe ohia n'ime ubi ndu.Onye nke Baptizim ghọtara site na Mo Nso na Chineke nime Kraist nebia n'uwa ayi. Ya mere, ọ malitere ịkpọ ndị mmadụ ka ha nwee uche ziri ezi ma dịrị njikere ịnakwere Onye Na-abịa. Mmesi ike ya maka ikwadebe uzọ nke Kraist mere ya olu n'osimiri nke uwa ayi. Ọ kpọghị onwe ya onye amụma ma ọ bụ onye ozi, kama ọ bụ olu. Ma olu Chineke nyere ikike, ghara ikwe ka akọ na uche na-ehi ụra ma nwee ntụsara ahụ na mmehie ha.
Kedu ihe olu a na-ekwu? Okwu nke ozi ya bu: Bilie, mata na ala eze ahu di n'aru gi! Mee ka ndụ gị dị mma! Chineke dị nsọ, ọ ga-ekpe gị ikpe. Maka ụgha ọ bụla, izu ohi, nnupụisi na ezighị ezi Chineke ga-akpọ gị ka ị na-aza ajụjụ ma na-ata gị ahụhụ n'ọkụ ala mmụọ. Chineke elegharaghị mmehie gị anya. . Onye ajọ omume gabu ihe ojo n'iru Ya nime nmehie nile ya. Onye ahu nke di nma dika onye di nma agagh adasi nma karia ihe ojo ahu n'ihi na odigh onye obula nwere ihe obula n'iru Ya.Nkwenye siri ike nke onye Baptist na-eduga nyocha onwe onye, ihe ọmụma nke onye rụrụ onwe ya, ịda mbà na mpako. Nwanna, ị na-ele onwe gị anya dị ka onye dị mma ma na-anabata? Na-eme ihe n'eziokwu ma kwupụta mmehie gị! Ọ bụrụ na ị ghọgbuo onye ọ bụla site na obere ntakịrị, weghachitere ya onye nwe aka nri ozugbo. Nwee obi ike ma dị ndụ maka Chineke. Kpee ihe gbagọrọ agbagọ n'omume gị. Daa n'ala nke ukwuu n'ihi na i meela ihe ọjọọ.
Ọtụtụ n'ime ndị nnọchiteanya ahụ bụ ndị Farisii. Ndị Nkwenkwe Baptist na-agba ha ume n'ihi na ha kwuru na ha bụ ndị ezi omume, ndị dị nsọ na ndị dị mma, jiri nlezianya na-edebe iwu ahụ, ma ha na-aghọgbu onwe ha. Ha na-eme ka hà na-asọpụrụ, ebe ha bụ n'ezie ndị jọgburu onwe ha, na-enwe foto rụrụ arụ nke na-eji obi ha na-agafe n'ime obi ha jupụtara n'echiche ọjọọ dị ka akwu nke ajụala.Ihu ihu ha egbochiri John ịba ha mba, ma na-echetara ha na anyị nile nwere oké ọchịchọ nke ịlaghachikwute Chineke, iji kwadebe ụzọ nke ọbịbịa nke Onyenwe anyị n'oge na-adịghị anya.
EKPERE: Onyenwe anyi, I mara obi m, ihe gara aga na nmehie m. Emerem ka ihere me n'iru gi, meghee ya ma-ọbu zoro ezo. Ana m ekwupụta ihe ọjọọ m niile n'ihu gị ma rịọ gị mgbaghara. Ejila m ọnụnọ gị. Nyere m aka ịghaghachite ihe m na-erigbu n'aka ndị ọzọ ma rịọ ka m gbaghara onye ọ bụla m mejọrọ. Kwụsị m mpako, mee ka m dị ọcha site na ebere gị niile, Onye kachasị ọmịiko nke ndị na-eme ebere!
Olee otú Baptist si akpọ ndị mmadụ ka ha kwadebe ụzọ Jehova?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)